इन्फोग्राफिक्स: यातायात र एसईओ को लागी राम्रो
एक इन्फोग्राफिक के हो?
बिहीबार, जुलाई 1, 2010 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
इन्फोग्राफिक्स केहि समय को लागी गरीएको छ तर भर्खर सबै क्रोधमा परिणत भएको छ। Digg dying जस्तो साइटहरूसँग, मार्केटर्स जसले आफ्नो साइटमा ट्राफिकको महासागर प्राप्त गर्न चाहान्छन् उनीहरूले जानकारीपूर्ण ग्राफिक्स समाहित गरिरहेका छन् जुन राम्रो कथा भन्छ। हजारौं डलर को एक जोडी को लागी, तपाई एक इन्फोग्राफिक कम्पनी हाई रिजोलुशन जानकारीपूर्ण प्रदर्शन उत्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ जसले दृष्टि समस्याको वर्णन गर्दछ। इन्फोग्राफिक कम्पनीले अनुसन्धान गर्दछ र डिजाइन। केहि इन्फोग्राफिक कम्पनीहरु का चलिरहेको सदस्यता छ।
बाट शीर्षकमा एक इन्फोग्राफिक ग्राहक चुम्बकत्व:
त्यहाँ बाहिर केहि इन्फोग्राफिक्स डिजाइन कम्पनीहरू छन् DK New Media, कि यो सेवा प्रदान गर्दछ। एक राम्रो इन्फोग्राफिक द्वारा उत्पन्न भाइरल ट्राफिक केवल आधा कहानी छ। धेरै व्यक्तिहरू ईम्बेड गर्छन् र उनीहरूको ब्लगमा र सामाजिक मिडियामा इन्फोग्राफिकको बारेमा कुरा गर्छन्, यो तपाईंको व्यवसायमा ब्याकलिks्कहरू परिमार्जनको लागि उत्कृष्ट रणनीति हो।
टैग: ग्राहक चुम्बकत्वइंफोग्राफ़कइन्फोग्राफिकको मानएक इन्फोग्राफिक के हो
कार्य प्रबन्धन हायटास्कको साथ सजिलो छ
के म एकमात्र हुँ जसले अझै रचनात्मक मार्केटिंग मन पराउँछु?
अगस्ट,, २०१ 22 2012:२१ अपराह्न
इन्फोग्राफिक्स प्रासंगिकता सोशल मिडियामा दैनिक बढ्दै छ। मैले छनौट गरेको इन्टरनेट मार्केटिंग एजेन्सीले मलाई यी चीजहरू वास्तवमा कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने बारे सटीक संख्या देखाउँदै थियो। राम्रो पोष्ट!